မော်စကိုရှိ Quivering Love ကိုပေးပို့ခြင်း - ပန်းများမှာယူပါ
60 စင်တီမီတာ 50 စင်တီမီတာ
Delivery ~ 2h ။ မိနစ် ၃၀ ။မော်စကိုတွင်အခမဲ့
အနံ 50 စင်တီမီတာ
နှင်းဆီ - 51 pcs ။
ထူးခြားသောကြီးမားသောဘူးသီးများပါ ၀ င်သည့်အနီရောင်နှင်းဆီပန်းများပါ ၀ င်သည့်လှပသောပန်းစည်းသည်လှပသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏စိတ်နှလုံးကို ၀ မ်းသာစေသည်။ ဤသို့သောလက်ဆောင်သည်သင်၏ခံစားချက်များကိုနူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီးတုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ကောင်းသောချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ကြည်ညိုလေးစားမှုကိုကိုယ်စားပြုသည့်သင်၏ခံစားချက်များကိုသဲလွန်စမရှိဘဲဖော်ပြရန်ကူညီလိမ့်မည်။
8489 XNUMX ₽ နှင်းဆီပန်းနှင့်အတူခြင်းတောင်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Iris နှင့် tulips တို့၏တောင်းတွင်မည်သည့်အခါသမယအတွက်မဆိုအကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
12980 XNUMX ₽ Iris နှင့်အတူခြင်းတောင်း
Chrysanthemum ချုံ 15 pcs ။ , ပန်းစည်းများအတွက်ထုပ်ပိုး: ခံစားခဲ့ရသည်
5840 XNUMX ₽ chrysanthemums 15 ပန်းစည်း
Tulip - 21 pcs
ကြော့ရှင်းသောခရမ်းရောင် tulips တစ် ဦး ပန်းစည်း။
3645 XNUMX ₽ 21 tulips ၏ပန်းစည်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပန်းပွင့်များ၏လတ်ဆတ်မှုကိုအာမခံပါသည်။ နှင်းဆီပန်းများထက်လှပပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့သောပန်းများမရှိတော့ပါ။ ခေတ်မီဆန်းပြားသောအဖြူနှင့်ပန်းရောင်ဘူးသီးများပေါင်းစပ်ခြင်းသည်အပြစ်ကင်းစင်မှုနှင့်လူတိုင်း၏နှလုံးသားအတွင်းထောင့်ကိုတွေ့နိုင်သည့်ပထမဆုံးချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏အရသာကိုထိမိစေသည်။
3713 XNUMX ₽ နှင်းဆီပန်းနှင့်အတူလေးထောင့်ကွက်။
Mint - 10 pcs
စတော်ဘယ်ရီမှထူးခြားသောလက်ဆောင်သည်သင်၏မိန်းကလေးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အမေနှင့်အဖွားသည်ကြာရှည်စွာမရှိခြင်းကြောင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၏အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်ပြီးသေတ္တာနှင့်အရသာရှိသောသီးများကိုကြိုက်လိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်စတော်ဘယ်ရီရေးစပ်သီကုံးသည်လူကြိုက်များသနည်း။ အဖြေမှာရှင်းပါသည် - တစ်ခုမှာအမြင်အာရုံ၊ အတူတူအတူတကွသူတို့အများကြီးပိုပြီးခံစားချက်တွေကိုနှင့်စိတ်ခံစားမှုကိုနှိုးဆော်!
4620 XNUMX ₽ "စတော်ဘယ်ရီသေတ္တာ"
22962 XNUMX ₽ 51 အဖြူရောင်နှင်းဆီပန်းနံပါတ်5တောင်း
Hydrangea - 15 pc ။
မိန်းမတိုင်းသည်နှလုံးသားတစ်ခုတွင်မင်းသမီးဖြစ်ပြီးလူတိုင်းကသူမခြေထောက်တွင်ပန်းများပွင့်စေလိုကြသည်။ ရောင်စုံ hydrangea ၏ပန်းစည်း!
24143 XNUMX ₽ Orpheus ပန်းစည်း။
ဖွဲ့စည်းမှု: ထုပ်ပိုးခြင်း (တိပ်ဖြင့်ရုပ်ရှင်)၊ Lisianthus 7pc၊ Gerbera 7pc၊ ဘုရ်ှသည် ၇ စင်တီမီတာမြင့်တက်သည်။ Carnation 7pc၊ Calla 5pc၊ Aspidistra 5pc၊ Bergrass၊ Salal 6pc ။ Anthurium 7pcs ။ , Cymbidium Orchid (ဌာနခွဲ)
28138 XNUMX ₽ ပန်းပွင့်နံပါတ် ၄